Unyanzvi hweSimalt Kubva kuIslamabad: Chii Chinonzi Referrer Spam uye Nzira Yokudzivisa Sei?
Sohail Sadiq, nyanzvi ye Semalt , anovimbisa kuti zvinogona kurohwa kuratidza, kufema uye kuputika spam mu account yako yeGoogle Analytics, asi iwe unoda kuziva chii chinonzi referrer, crawler, uye mweya spam uye kuti iwe unogona sei kuipinha.
Chii chinonzi Referrer spam?
Kana iwe uchiona iyo referrer spam iri kuwanikwa mubhuku rako reGoogle Analytics, unofanira kutora matanho nekukurumidza. Kana zvisina kudaro, inogona kuumba hutano zvakare kune webhusaiti yayo pachayo kana kuderedza nzvimbo yako yekutsvaga mu injini yekutsvaga mhinduro . Pamwero mukuru, haisi dambudziko rakakura asi pamwero muduku, inotumira mazana kuzviuru zvekufambisa fake kunzvimbo uye ichapedza data yako yeGoogle Analytics. Referrer spam kazhinji inobva kumawebsite akaita se darodar - personal computer expert support.com, kuwana-free-traffic-now.com, uye free-share-buttons.com. Iwe uchaona kuti zvivako izvi zvinokonzera 0:00 yechipiri yakashandiswa panzvimbo yako yepaiti uye kubhadhara kwemazana kuri 100%.
Chii chinonzi Ghost Spam?
Mweya mweya spam unowedzera kuvhara dhenda yekushanyira pasina kushanyira mapeji ako ewebhu. Ingadai yakatorwa kubva panzvimbo yepaiti uye inotungamirirwa kuGoogle Analytics account. Inogonawo kukuendesai kune dzimwe nyika dzisinganzwisisiki, yechitatu. Iyo mweya spam inouya nenzira yekutumira uye zvishoma nezvishoma inoderedza nzvimbo yako yepaiti muGoogle, Bing, uye Yahoo. Event-tracking.com ishizha rewebhu rinotumira mweya spam kune nhamba yakawanda yewebsite mazuva ose..
Chii chinonzi Crawler Spam?
Kukwezva spam kunoshanyira nzvimbo yako asi haina kubatana nemapeji ako. Chinangwa chayo ndechekunyorwa mubhadharo yeGoogle Analytics uye kurongedza unhu hwako hwekushanyira kune mumwe wechitatu, nzvimbo isingazivikanwi. Chikwata che spam chinogona kukubatsira kuti ufambe nzvimbo yako, asi hazvibatsiri kana ichivandudzwa injini injini mazana. Spam inogona kuuya chero ipi zvayo uye haifaniri kuregererwa chero zvakashata. Paunowana spam, unogona kusundirwa kune veOO professionals kuti uibvise. Paunosvika ikoko, unogona kushandiswa basa reSeO rwemarudzi akasiyana, rudzoserwe kunzvimbo chaiye sechikamu chechirongwa chekubatana kana kuguma neine hutachiwana hwemarudzi akadai.
Ndingarega Sei Referrer Spam?
Nhanho yekutanga ndeyekushanyira peji yeMagadziro mubhuku rako reGoogle Analytics uye chengeta paIri kunze kwezvose zvinokonzerwa nemafungiro anozivikanwa nemabhodhi. Iwe unogona kugadzira mafaira uye wobva wawedzera mawebhusayithi anotyisidzira kwavari kuti abvise referrer spam. Imwe sarudzo ndeyokugadzirisa zvirongwa zve .htaccess yako file.
Ndingarega sei Mweya Spam?
Nzira yakanakisisa uye yakanyanyisa yokumisa mweya spam ndeyokuisa ma filters mubhuku reGoogle Analytics. Zvose zvinoshanyira vashanyi vewebsite yako zvinogona kugoverwa muzvikamu zvakasiyana, uye iwe unogona kugadzira zvinyorwa zvezvikamu zvose zvakasiyana. Sezvo ghost spam isinganzwisisiki nemasikirwo uye haingatumi zvinyorwa zvayo kubva kune iyo Google Analytics account, saka iwe unofanira kuzvivhara kuburikidza ne .htaccess file kana pane sezinga ye server.
Ndingaita Sei Kuti Ndirambe Ichipisa Spam?
Sezvo spam spam inoshanyira webhusaiti yako, unogona kuwedzera mazita ekutonga mairi mu filter yeGoogle Analytics uye ita kuti ivhare. Kune nzvimbo dzakasiyana-siyana, uye urongwa hunoramba huchiwedzera zuva nezuva. Simoahava.com/spamfilter iyi inozivikanwa necheki spam iyo inofanira kurambidzwa mubhuku rako reGoogle Analytics. Searchcommander.com pane imwe nzvimbo yakafanana iyo inobatanidzwa mukutumira spam spam kuvashandisi.